Posted by Kaung Kin Ko at 10:28 AM
ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဝါး၊ခါးသီးတဲ့ အရာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရလည်း ကိုကို့ လက် ကိုမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ရင်း...အားလုံးကိုကျော်ဖြတ်သွားမယ်...
ကဗျာလေးနဲ့ အရာရာအတွက် ကျေးဇူးပါ...
ကိုကို့ ကိုအရမ်းချစ်တယ် ..
အဟင့်စီ က နံပါတ် (၁) လားဟင်
အရိုးနဲ့ လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတာ ကတမျိုးကြီးပါလားးp
ကောင်းတယ်လို့တောင် မပြောရက်ပါဘူး ကိုကောင်းရေ။ ခေတ်မှီနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ စီတစ်လုံးက ဘာမှ မပြောပလောက်ပါဘူး မဖြိုးရေ။ စိတ်ခွန်အား ရှိရင် ဆေးတောင် မလိုပါဘူး။ ဤမွေးနေ့မှသည် နေ့သစ်များအဆက်ဆက်တိုင်အောင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
C for Clear တဲ့ .....
Happy Birthday to KKK's Dear. :P
မွေးနေ့ ဆိုလို့လာဆုတောင်းပေးတာ
ယခုမွေးနေ့ မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်
သာယာချမ်းမြေ့ပြီး ပြီးပြည့် စုံတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ပိုင်နိုင်
စီပိုးက ကြောက်စရာကြီး အရိုးနဲ့ လက်မှတ်တော့မထိုးလိုက်ပါနဲ့ ကိုကင်း...
Happy birthday kkk’s dear!
အချစ်က ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များကို ယူဆောင် ပေးခဲ့ပြီဆိုတော့.... အကိုရေ..........
ဘာမှ ထပ်ဆုတောင်းပေးဖို့ မလိုအောင် ပြီးပြည့်စုံနေပြီ ထင်ပါတယ်။
ဒီ့ထက်မက ဆုံဆည်း ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ..း)
celebration day များ စွာ သို့။
ကောင်းကင်ကိုဆိုတဲ့ ကိုကိုနဲ့ ကိုကို့ကိုအရမ်းချစ်သူတို့ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့...
C for Chocolate :D
ကို ကောင်းကင်ကိုရေ .....စာအတော်များများ ဖတ်ခဲ့ပြီးလို့ ပြန်လိုက်ပါဦးမယ် ။ ဘန်ကောက်ရောက် ရင် ကဗျာစာအုပ်ဝယ်ချင်ပေမယ့် စူပါမါ့ကတ်တွေမှာ မရနိုင်ဘူးလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ တည်းတာက Silom က Holiday Inn မှာပါ ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့ နဲ့ ၂၁ ရက်နေ့မှာ လာမှာမို့ သိချင်ပါတယ်
Ms.Hnin Ei Ei Phyu said...
A touching poem for me. i m really inspired by your poem. let me share.